अप्रिल ३० बाट केही स्मार्टफोनहरुमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र म्यासेन्जर बन्द हुनेछ ! - SangaloKhabar
अप्रिल ३० बाट केही स्मार्टफोनहरुमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र म्यासेन्जर बन्द हुनेछ !
काठमाडौं/एजेन्सी । अप्रिल ३० बाट केही स्मार्टफोनहरुमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र म्यासेन्जर लगाएतका सोसल साइटको सपोर्ट बन्द गरिने बताइएको छ । माइक्रोसफ्टले विन्डोज फोन को लागि फेसबुक बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यदि तपाईसँग पनि विन्डोज फोन छ भने सोसल मिडियाको सपोर्ट पाउनुहुनेछैन ।
तर विन्डोज फोन युजर्सहरुले सोसल मिडियाको एक्सेस पाउनका लागि थर्ड पार्टी एप या वेबको साहारा लिनुपर्नेछ । अहिले आएर विन्डोजको स्मार्ट फोन बन्न बन्द भइसकेको छ । यसका साथै माइक्रोसफ्टले धेरै पहिलेदेखि नै आफ्नो स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्न छोडिसकेको छ ।
यति मात्रै होइन विन्डोज फोनमा ह्वाट्स एपको सपोर्टलाई पनि धेरै पहिल्यै बन्द गरिदिएको जनाएको छ । माइक्रोसफ्ट आफैले यो जनाकारी गराएको हो, आगामी डिसेम्बर २०१९ बाट विन्डोज फोनको लागि सिक्योरिटी अपडेट्स दिनेछैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २२, २०७५ समय: १७:५२:४१